“Nguva Yokuda Nenguva Yokuvenga” — RAIBHURARI YEPAINDANETI yeWatchtower
“Nguva Yokuda Nenguva Yokuvenga”
Zvinodiwa naMwari Nezvaanovenga
Pazvakakodzera Kuti Mwari Aratidze Ruvengo
Kuziva Pokugumira Pakuratidza Rudo Uye Ruvengo
“MWARI rudo.” Mune dzimwe nyika mashoko aya anowanzoiswa pamadziro mumba. Zvechokwadi aya mashoko akazonaka anotsanangura zvakaita Mwari, kuti ndiye muenzaniso mukuru worudo.
Asi vakawanda havazivi kuti mashoko iwayo ari muBhaibheri. Muapostora Johani ndiye akanyora kuti: “Uyo asina rudo haasati asvika pakuziva Mwari, nokuti Mwari rudo.” (1 Johani 4:8) Johani akanyorawo nezverudo runa Mwari kuvanhu vanoda kudzikinurwa achiti: “Mwari akada nyika kwazvo zvokuti akapa Mwanakomana wake akaberekwa ari mumwe oga, kuti munhu wose anotenda maari arege kuparadzwa asi ave noupenyu husingaperi.”—Johani 3:16.
Izvi zvinoita kuti vamwe vafunge kuti Mwari anongotida pasinei nezvatinoita. Mararamiro ari kuita vakawanda anoratidza kuti vanofunga kuti pasinei nemabatiro avanozviita, Mwari haana basa nazvo. Asi ichokwadi here ichocho? Mwari anoda vose vakanaka nevakaipa here? Ane vaanombovenga here?
Mambo akachenjera Soromoni akanyora kuti: “Chinhu chimwe nechimwe chine nguva yakatarwa, uyewo zvose zvinoitwa pasi pematenga zvine nguva yazvo . . . nguva yokuda nenguva yokuvenga.” (Muparidzi 3:1, 8) Mashoko aya anoratidza kuti kunyange zvazvo Mwari aine rudo nomutsa, ane paanombovengawo zvimwe zvinhu.
Shoko iri rokuti “venga” muBhaibheri rinorevei? Rimwe duramazwi rinoti: “Mumagwaro shoko rokuti ‘venga’ rinoreva zvakasiyana-siyana. Rinogona kureva kusafarira munhu kana kusatombomuda zvachose. Ruvengo irworwo rwunogona kuita kuti ude kukuvadza munhu wacho.” Ruvengo urwu ndirwo rwatinogara tichiona uye tinoona zvakaipa zvarwuri kukonzera pasi pose. Duramazwi iri rinoenderera mberi richiti: “Shoko rokuti ‘venga’ rinogonawo kureva kusada mumwe munhu asi usina pfungwa dzokumukuvadza.”
Pfungwa yechipiri yeduramazwi iri ndiyo yatiri kuda kutaura nezvayo. Uku kuvenga chimwe chinhu zvakasimba asi usina pfungwa yokuda kuchikuvadza kana kuti kutsiva. Zvinoita here kuti Mwari ave neruvengo rwakadai? Cherechedza mashoko ari pana Zvirevo 6:16-19 okuti: “Kune zvinhu zvitanhatu zvinovengwa naJehovha; chokwadi, zvinhu zvinomwe ndizvo zvinosemesa mweya wake, zvinoti: maziso anozvikudza, rurimi runoreva nhema, maoko anoteura ropa risina mhosva, mwoyo unoronga mazano anokuvadza, tsoka dzinokurumidza kumhanyira zvakaipa, chapupu chinonyengera chinoreva nhema, uye chero munhu upi zvake anoita kuti pakati pehama pave nokukakavara.”
Sezvatiri kutoona, pane mamwe maitiro anovengwa naMwari. Asi hazvirevi hazvo kuti anovenga munhu wacho anenge azviita. Anonzwisisa zvingaita kuti munhu adaro, zvakadai sechivi chatinacho, nzvimbo yatiri, makudzirwo atakaitwa kana kuti kusaziva. (Genesisi 8:21; VaRoma 5:12) Munyori waZvirevo anotsanangura izvi achishandisa muenzaniso wakanaka wokuti, “Jehovha anotsiura waanoda, sokutsiura kunoita baba mwanakomana wavanofarira.” (Zvirevo 3:12) Mubereki angavenga zvakaipa zvinoitwa nemwana wake, asi anenge achiri kumuda uye anomuranga kuti asiyane nemabasa ake akaipa. Jehovha anoratidza rudo rwake saizvozvo kana akaona kuti pane mukana wokuti munhu anenge aita chivi apfidze.
Ko kana munhu akange ava kuziva zvinodiwa naMwari asi achiramba kuzviita? Mwari haafariri munhu akadaro. Kana achiita nemaune zvinhu zvinovengwa naJehovha, anozviita muvengi waMwari. Somuenzaniso Bhaibheri rinoti: “Jehovha anoongorora munhu akarurama pamwe chete neakaipa, mweya wake unovenga munhu wose anoda zvechisimba.” (Pisarema 11:5) Munhu akadaro asingapfidzi haakanganwirwi semataurirwo azvakaitwa nemuapostora Pauro mutsamba yaakanyorera vaHebheru achiti: “Kana tiine tsika yokuita chivi nemaune pashure pokunge tagamuchira zivo yakarurama pamusoro pechokwadi, hapasisina kana chibayiro chimwe chasara nokuda kwezvivi, asi pane kutarisira kunotyisa kwokutongwa uye pane godo rinopisa richapedza vaya vanopikisa.” (VaHebheru 10:26, 27) Sei Mwari ane rudo achiita zvinhu zvakadai?
Kana munhu achiita chivi chikuru nemaune, uipi hwacho hunodzika midzi zvokuti iye wacho ndiye anenge ava kunzi muipi. Ndopaya pazvinenge zvava kunzi chakabaya chikatyokera. Bhaibheri rinofananidza munhu akadaro neingwe isingakwanisi kuchinja mavara ayo. (Jeremiya 13:23) Sezvo anenge asingachakwanisi kupfidza anozopedzisira aita chinonzi neBhaibheri “chivi chisingaperi,” chisingakanganwirwi.—Mako 3:29.
Ndizvo zvakaitika kuna Adhamu naEvha uyewo Judhasi Iskariyoti. Sezvo Adhamu naEvha vakasikwa vasina chivi uye mutemo waMwari wavakapiwa wakanga wakajeka uye vachinyatsounzwisisa, zviri pachena kuti vakatadza nemaune, saka zvakanga zvisingaiti kuti varegererwe. Mwari paakazotaura navo, haana kuvakumbira kuti vapfidze. (Genesisi 3:16-24) Kunyange zvazvo Judhasi aiva munhu anotadza, akava noushamwari neMwanakomana waMwari asi akapedzisira ava mutengesi. Jesu pachake akamuti “mwanakomana wokuparadzwa.” (Johani 17:12) Bhaibheri rinoratidzawo kuti Dhiyabhorosi ava nenguva refu achitadza nemaune uye changosara kuti aparadzwe. (1 Johani 3:8; Zvakazarurwa 12:12) Vanhu ava vakaita zvinoita kuti vavengwe naMwari.
Asi hazvirevi hazvo kuti munhu wose anenge atadza haachakanganwirwi naMwari. Jehovha ane mwoyo murefu uye haanakidzwi nokuranga vanhu vanenge vatadza nokusaziva. (Ezekieri 33:11) Anovakurudzira kuti vapfidze kuti vagoregererwa. Isaya 55:7 inoti: “Munhu akaipa ngaasiye nzira yake, uye munhu anokuvadza ngaasiye kufunga kwake; uye ngaadzokere kuna Jehovha, iye achamunzwira ngoni, uye kuna Mwari wedu, nokuti achakanganwira zvikuru.”
Chokwadi ndechokuti, sevatevedzeri vaMwari, vaKristu vechokwadi vanofanira kunzwisisa kuti pane “nguva yokuda nenguva yokuvenga.” Kuzivana nemumwe munhu kungakutadzisa kuziva pokugumira pakuratidza rudo nengoni. Asi mashoko omudzidzi Judha anogona kutibatsira kuti tizive kuti tinoratidza ngoni kusvika papi uye tinovenga chivi kusvika papi. Anoti: “Rambai muchinzwira vamwe ngoni, muchiita saizvozvo nokutya, muchivenga kunyange nguo yomukati yakasvibiswa nenyama.” (Judha 22, 23) Saka tinofanira kuvenga zvakaipa, kunyange zvisingarevi hazvo kuti tinobva tavenga wacho ari kuzviita.
VaKristu vanorayirwa kuti vaitire vavengi vavo zvakanaka kuratidza kuti vanovada. “Rambai muchida vavengi venyu uye muchinyengeterera vaya vanokutambudzai,” akadaro Jesu. (Mateu 5:44) Ndokusaka Zvapupu zvaJehovha zvichiparidza zvaparidzazve mashoko akanaka oUmambo hwaMwari kuvavakidzani vazvo, kunyange vamwe vakasateerera. (Mateu 24:14) Kubva pane zvavanodzidza muBhaibheri, vanonzwisisa kuti munhu wose akakodzera kudiwa uye kuratidzwa ngoni naJehovha. Vanhu pavanovatambudza kana kuti pavanoramba kuteerera, vanotevedzera zvakataurwa nomuapostora Pauro zvokuti: “Rambai muchikomborera vaya vanokutambudzai; komborerai uye musatuka . . . Musadzorera chakaipa nechakaipa kuna ani naani zvake.” (VaRoma 12:14, 17) Vanoziva kuti Jehovha ndiye anozoziva kuti ndiani akakodzera kudiwa kana kuvengwa naye. Ndiye mutongi wokupedzisira panyaya youpenyu norufu.—VaHebheru 10:30.
Zvechokwadi “Mwari rudo.” Tinofanira kuratidza kuti tinokoshesa rudo rwake toedza nepatinogona napo kuti tizive zvaanoda tobva tazviita. Zvapupu zvaJehovha zviri kwaunogara zvichafara kukuratidza zvinodiwa naMwari muBhaibheri rako uye kuti ungazviita sei muupenyu hwako. Kana ukadaro hauzovengwi naMwari asi achakuda.
[Mashoko okukwezva vaverengi ari papeji 23]
“Kune zvinhu zvitanhatu zvinovengwa naJehovha; chokwadi, zvinhu zvinomwe ndizvo zvinosemesa mweya wake, zvinoti: maziso anozvikudza, rurimi runoreva nhema, maoko anoteura ropa risina mhosva, mwoyo unoronga mazano anokuvadza, tsoka dzinokurumidza kumhanyira zvakaipa, chapupu chinonyengera chinoreva nhema, uye chero munhu upi zvake anoita kuti pakati pehama pave nokukakavara.”—ZVIREVO 6:16-19
[Mashoko aokukwezva vaverengi ari papeji 24]
“Kana tiine tsika yokuita chivi nemaune pashure pokunge tagamuchira zivo yakarurama pamusoro pechokwadi, hapasisina kana chibayiro chimwe chasara nokuda kwezvivi, asi pane kutarisira kunotyisa kwokutongwa.”—VAHEBHERU 10:26, 27
[Mashoko okukwezva vaverengi ari papeji 25]
“Munhu akaipa ngaasiye nzira yake, uye munhu anokuvadza ngaasiye kufunga kwake; uye ngaadzokere kuna Jehovha, iye achamunzwira ngoni . . . Achakanganwira zvikuru.”—ISAYA 55:7
Mubereki ane rudo anoranga mwana wake kuti amubatsire
Vasungwa vakawanda vakabatsirwa norudo rwaMwari uye ngoni dzake